HIGH GLOSS KITCHEN CABINETS PROS AND CONS - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi High Gloss Kitchen Cabinets Pros and Cons
Nantsi ikhabhathi yethu yasekhitshini ebengezela ngobuhle nangobubi bayo kubandakanya ukuba ziyintoni, kutheni kufanelekile ukuba ukhethe esi sitayile kunye neenkcukacha kwi-lacquer, acrylic & yoyilo lekhabhathi yoyilo. Iikhabhathi zekhitshi eziphezulu eziqaqambileyo zizinto ezinokuyilwa zale mihla. Ukugqitywa kwe-gloss ephezulu kunokufezekiswa ngokuqinisekileyo nge-lacquer, nangona ipeyinti kunye ne-acrylic zezinye iindlela ezinokubakho.
Ukuba ucinga ukufaka iikhabhathi zekhitshi eziphezulu zeprojekthi yakho elandelayo, eli nqaku liza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi.
Zintoni iiGlass zeLacquer zeKhitshi eziPhezulu?
Iiglasi eziPhezulu zeGloss zeKhitshi zePros
Iiglass eziPhezulu zeKhabhinethi eziGcweleyo
Ipeyinti ephezulu yeGloss yeeKhabhathi zaseKhitshini
Isigcina-ntloko esiPhezulu se-Acrylic ekhitshini
Iiglass eziPhezulu zeGlasi eziPhezulu eziPhezulu
Iikhabhathi zasekhitshini zinokugqitywa ngeendlela ngeendlela, nganye kuzo inikezela ukubonakala okwahlukileyo kumphezulu wekhabhathi. Xa i-lacquer isetyenziswa, iifomathi ezininzi zepeyinti / indibaniselwano yesitywina iyasetyenziswa, ihlala i-MDF.
Iilacquers zisetyenziswa kusetyenziswa isitshizi sokupeyinta sixhaswe ngumoya oxinzelelweyo. Xa bevezwa emoyeni, baqala ukunyanga.
umgodi womlilo pergola
I-lacquers ze-Matte ziqinisa ukugqibezela okuthe tyaba okungazukubonisa ukukhanya okukhulu. Ii-lacquers ezi-glossy-finish nazo ziyafumaneka, kwaye ziyahluka ngokwenani lokukhanya abakunika lona.
Ukuqaqamba okuqaqambileyo, okukhanyayo okugqityiweyo kwe-lacquer kubizwa ngokuba 'kukukhanya okuphezulu'. I-semi-satin kunye ne-satin zibhekisa kwiilacquers ezibonisa ukukhanya okungaphezulu kokugqitywa kwe-matte, kodwa kungaphantsi kweekhabhathi eziphezulu. Funda ngakumbi malunga iikhabhathi zekhitshi ze-lacquer Apha.
Ngoku siza kugubungela ubuhle bekhitshi ekhitshini ubuchule kunye nobubi ngokuqala ngeenzuzo.
Iiglasi eziPhezulu zeGloss zeKhitshi ziNgcono
Ukuba ukhe wabona iikhabhathi zekhitshi eziphezulu ebusweni, ukhe wabona ukubonakala kwazo okuhle kunye nefuthe elibonakalayo elinokubakho kwisikimu yoyilo. Ngokuqinisekileyo esinye isibonelelo, kodwa kukho nezinye ngokunjalo.
Ubuhle -Iikhabhathi zekhitshi ezinobukhazikhazi obuphezulu ziyamangalisa, zitsalela iliso nokuba zifakwe phi. I-Lacquer inento ekungekho enye ikhabhathi yokugqiba enokulingana nayo-ubunzulu.
I-lacquer yakhiwe, yahlulwa ngokomaleko, isebenzisa ubuninzi beebhatyi ezilishumi ukufezekisa ukuqaqamba okuphezulu. Imveliso yokugqibela imema ukunconywa kunye nokucamngca. Ukuba usesicingweni malunga nendlela i-lacquer ephezulu enokuyenza ekhitshini lakho, uninzi lwee-installers zibonelela ngezixhobo zoyilo.
Ungayilayisha imifanekiso yekhitshi lakho kwaye usebenzise isoftware yazo ukuzama iindlela ezahlukeneyo zokugqiba eziphezulu.
Uhlobo -Ukuba ubunzulu budityaniswa nombala kunye nokuqaqamba, iziphumo kukugqitywa kwekhabinethi ekhitshini ekhumbuza ilitye lendalo elicwebezelayo okanye ithayile yeglasi, kodwa ngaphandle kobunzima obugqithisileyo. Ii-Lacquers ziyafumaneka kwimibala eyahlukeneyo. Abathengisi abahlukeneyo banokugcina imigca eyahlukeneyo yemveliso.
Imibala ethandwayo yeekhabhathi ezinobukhazikhazi obuphezulu zibandakanya ubomvu obomvu, uhlaza olunzulu lwamahlathi, kunye naphakathi kobusuku oluhlaza okwesibhakabhaka. Abanye abaqeqeshi bokufaka bazimisele ukusebenza kunye noluhlu olulinganiselweyo lwemibala, ngelixa abanye bazimisele ukwenza iikhabhathi zakho ngokwezifiso.
Imibala yesiqhelo icelomngeni ngakumbi kwaye inokubiza kakhulu, kuba i-lacquer yokuthinta inzima. Isinyibilikisi sisetyenziselwa ukwenza i-lacquer lula ukusasaza. Uxinzelelo lwe-lacquer kwisinyibilikisi esisetyenzisiweyo singahluka kwiindawo ezahlukeneyo okanye ngeentsuku ezahlukeneyo.
Ukutshintsha isixa se-solvent kwi-lacquer kuyakutshintsha i-tint. Iingcali zinokuhlengahlengisa konke oku ukuze ziqinisekise ukuba ufumana umbala ogqibeleleyo, kodwa kuhlala kukho iindleko ezongezelelekileyo.
Uncedo lokuCoca -Umgangatho ocwebezelayo, odibeneyo we-lacquer unesinye isibonelelo-kulula kakhulu ukusula ucocekile. Akukho zi-nooks okanye i-crannies zokungcola kunye ne-grime yokuqokelela. I-smudges kunye negrisi inokucinywa ngokusula ngokukhawuleza.
Ixabiso eliphantsi kunoTshintsho - Xa iikhabhathi zakho zasekhitshini zikhangeleka zidiniwe, unokuhendeka ukuba uzikhuphe kwaye uqalele phantsi. Unokuphinda uqwalasele esi sicwangciso xa ufumana isicatshulwa sokuqala.
Ukucokisa iikhabhathi zakho nge-lacquer gloss ephezulu kuxabisa ama-50-75% ngaphantsi kokutshintshwa kuphelele. Iziphumo ziyamangalisa.
Ukuba uyakwazi ukusebenzisa kwakhona iingcango zekhabinethi yakho yasekhitshini, uya konga imali eninzi, kodwa ukuthenga iingcango ezintsha nokuzambathisa nge-lacquer iseyenye indlela yokuhlawula iindleko yokutshintsha iikhabhathi ngokupheleleyo.
Njengalo naluphi na ukhetho loyilo, iikhabhathi zekhitshi eziphezulu ezinobunzima bazo. Ngelixa kungekho nanye kubo ebaluleke ngokwaneleyo ukucebisa ngokuchasene nokufaka i-lacquer ephezulu ye-gloss, kubalulekile ukuba uqonde ezantsi eziza nalo gqibelo.
Iindawo ekuhlala kuzo iqela le-bachelorette kuhlahlo-lwabiwo mali
Ukuqokelelwa kweSmudges -Ikhabhathi yekhitshi ephezulu ebengezelayo ikhanyisa ubungakanani obukhanyayo bokubuyela emehlweni ombukeli. Nantoni na ethintela oku kukhanya, njengothuli okanye iminwe yeminwe iya kuma ngenxa yeepropathi ezingabonakalisi kangako.
Ukungcola kubonakala kwangoko kwiikhabhathi eziphezulu zekhitshi. Ukuba uzifaka, zilungiselele ukusula iikhabhathi rhoqo. Ngethamsanqa, umphezulu otyibilikisiweyo we-lacquer ephezulu ayigcini ekungcoleni, ke akukho kukhuhla okubandakanyekileyo.
Inkcitho -Ukugqibezela okuphezulu kwe-lacquer akufiki ngexabiso eliphantsi. Obu buchule buchanekileyo buqhutywa kakuhle ziingcali, ezingakwaziyo ukuxubana kunye nokuthinta ukufezekisa umbala onqwenelayo, kodwa zisebenzise i-lacquer ukufezekisa ukugqibezela, okungenabala ngaphandle kwebhola.
I-Lacquer kukugqitywa okwakhiwe ngongqimba, kwaye umaleko ngamnye kufuneka ube ugqibelele ngaphambi kokuba kongezwe entsha.
Ukufezekisa ukuqaqamba okuphezulu, ubuncinci iidyasi ezintathu ukuya kwezine zelacquer ekumgangatho ophezulu ziya kufuneka, kwaye akuvakala ukuba kongezwe ishumi.
Ngelixa i-lacquer yoma ukuchukumisa ngaphakathi kweyure, kufuneka ibenzima ngokupheleleyo iiyure ezininzi ukuya kwiintsuku ezininzi, kuxhomekeke kwindalo esingqongileyo. Oku kunokuguqula iprojekthi yakho yokulungiswa kwekhitshi ibe yinto ende kakhulu kunokuba ubuzimisele.
Lindela ukuhlawula phakathi kwe- $ 50 kunye ne-100 yeedola kumgama ngamnye ukuze i-lacquer isetyenziswe ngokufanelekileyo kwiikhabhathi zakho. Kwikhitshi eliqhelekileyo, elineenyawo ezingama-20 zemigca yeekhabhathi, oku kusebenza phakathi kwe- $ 1000 kunye ne- $ 2000.
nxiba umakhulu kamakoti
Ukuphela kwe-UV -Ukuba ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo kuwela ngefestile yakho yasekhitshini kwiikhabhathi zekhitshi zecwecwe eliphakamileyo, ungaqala ukubona isiphumo sefu.
Amafu yimeko eyenzekayo xa i-lacquer ivezwa kukufuma okuphezulu. Ukugcina i-lacquer ekhitshini yekhitshi ephezulu yokugqiba, cinga ukufaka ifilimu yelanga kwiifestile zakho zasekhitshini ukukhusela ukukhanya kwe-UV.
Ubomi obude - Ubomi beekhabhathi zakho zasekhitshini buxhomekeke kwinxalenye enkulu ekugcineni ukufuma kuphume kumbindi wombindi. Iikhabhathi zasekhitshini ezinamacwecwe zithambekele ekuphuhliseni imikrwelo emincinci - iziqwenga ezincinci ezinokuthi zingabonakali, kodwa ezinokuvumela ukufuma ukuba kusebenze kungena kumbindi womnyango wekhabhinethi.
Ukuxobuka, ukuqhekeka, kunye nokujijisana yiyo yonke imiqondiso yokufuma okungaphezulu, kwaye ngelishwa ukutshintshwa kuphela kwesisombululo.
Xa ipeyinti isetyenziselwa ukwenza ukuqaqamba okuphezulu kwiikhabhathi zasekhitshini, ipeyinti esekwe kwioyile yinto ekhethiweyo.
Iipeyinti ezisekwe kwioyile zibambelela ngokulula emthini kwaye zome zigqibe ngokuqaqamba ngaphandle kokubonisa ukubetha ngebrashi. Isithintelo esinzima, esomeleleyo abasenzayo sikhusela undoqo womnyango wekhabhathi ngelixa uyincedayo yaphakama ekusebenziseni nasekuphatheni gadalala.
Ngelixa iidyasi ezininzi zelacquer zinokusetyenziswa ngemini enye, ipeyinti esekwe kwioyile ithatha iiyure ezingama-24 ukuya kuma-48 ukuphilisa ngokupheleleyo. Uya kudinga iingubo ezimbalwa zepeyinti kune-lacquer, kwaye awuyi kufuna isanti phakathi komaleko ngamnye.
Ukugqibezela okulula kunye nexabiso eliphantsi usebenzisa ipeyinti, thabatha iingcango zakho zekhabinethi kwiihenjisi kwaye uzizise ngaphandle ngomhla ozolileyo, ocacileyo.
Qala nge-primer yokutshiza, kwaye uyivumele yome iiyure ezili-12. Landela i-primer ngeebhatyi ezimbalwa zokoma ngokukhawuleza, ipeyinti ephezulu yokutshiza ukubuyisela iingcango zakho zekhabhinethi kunye nokufezekisa ikhitshi elikhazimlayo ngaphandle kwexesha.
Enye indlela yokufezekisa i-gloss ephezulu ekhitshini kukuthenga kunye nokufaka iingcango zekhabinethi yekhitshi ye-acrylic.
Endaweni yomthi okanye isiseko se-MDF esigutyungelwe ukugqitywa okunje ngepeyinti okanye i-lacquer, iingcango zekhabinethi zekhitshi zekhitshi azinazo iinkuni konke konke. Oku kuthetha ukuba abachaphazeleki kumonakalo wobumanzi, kwaye abayi kuluba, baxobule okanye bajije.
Umnyango wekhabhathi wekhitshi ye-acrylic sisiqwengana esomeleleyo seplastiki esomeleleyo kunye nesomeleleyo. Ayina pores ngaphezulu, ngenxa yoko amabala akakwazi ukuntywila kwaye anokucinywa ngokulula. Nokuba abamakishi abasisigxina abanako ukunamathela kwi-acrylic.
Ixesha lokufaka lincinci kakhulu kwiikhabhathi ze-acrylic kunepeyinti okanye i-lacquer, kuba iingcango zekhabhinethi ye-acrylic zigqityiwe kumzi-mveliso. Xa befika ekhayeni lakho, bafuna ukufakelwa ngokulula. Ingcali ekhitshini inokukunceda uku-odola ubungakanani obuchanekileyo kunye nezixhobo oza kuzidinga ukufaka iikhabhathi zekhitshi ezintsha ze-acrylic.
Esinye isibonelelo esongeziweyo sokusebenzisa i-acrylic ukufumana eso sikhanyiso sekhabhathi ekhitshini ebonakalayo bubomi bempahla. Iikhabhathi ze-Acrylic zinokuhlala ukuya kuthi ga kwiminyaka engama-20 ngaphandle kokuphela, tyheli, okanye ukujija. Nawuphi na umonakalo kwi-acrylic unokulungiswa ngokulula ngekhithi yokulungisa efumanekayo ngokorhwebo.
Iipaneli zeplati ziyile nto kanye zivakala ngathi: yipaneli enye ethe tyaba yomthi. Zisetyenziselwa uyilo lwanamhlanje nolwanamhlanje lwekhabhathi zasekhitshini kunye neefreyimu zedrowa. Xa kusetyenziswe ukugqitywa okuphezulu, nokuba ipeyinti, i-lacquer, okanye i-acrylic, banokuthatha inqanaba leziko ekhitshini lakho.
Ngemibala etyebileyo nenemibala efumanekayo etsala amehlo ngokubonakalisa ukukhanya, ungaguqula iingcango zekhabinethi yakho yasekhitshini kwindawo yokugcina engacacanga ukuya kwizinto ezinkulu zoyilo.
ngowuphi umsesane onxibe iringi yomtshato
Iikhabhathi ezingaphathwanga kakuhle, ezivulekileyo ngemijelo ebizwa ngokuba 'ziitshaneli', zilungelelanise kwaye zenze lula izithuba ezincinci ngokususa izixhobo zentsimbi zizonke, kwaye zibhangqane ngokukodwa ngokuhonjiswa okuphezulu kweeflethi zekhabhathi zekhitshi.
Ukuba uyila ikhitshi lakho ungabona iintlobo ezahlukeneyo zezitayile zekhabhinethi kunye nemibala ngokusebenzisa Isoftware yoyilo lwekhabinethi yasekhitshini Inkqubo. Uninzi lwezi luya kukuvumela ukuba uyile uyilo lwakho kwaye ubone ukudala kwakho kumbono o-2 okanye o-3 wokujonga.
Ucinga ntoni ngezi zinto zintle kangaka kunye nezibi? Sazise ukuba unamava neekhabhathi ezinobukhazikhazi obuphezulu ekhayeni lakho kwizimvo.
Isikhalazo segama sokutshintsha iGeorgia
Uyilo lwasekhaya lwesikhongozeli
ukuba wenze ntoni ngemihla
ukuba wenzeni umhla
izinto zokufumana usuku lwe-valentine